यस्तो पो प्रेम ! प्रेमीका लागि राजदरबार छोड्दै जापानी राजकुमारी ! – Karnalikhabar
जापानका सम्राटबाट अनुमति पाएपछि राजकुमारी माकोले विवाहको घोषणा गर्नुभएको हो । यो घोषणासँगै विवाहको लामो प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसैका साथ उहाँको शाही दर्जा पनि सकिनेछ ।
आइतबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राजकुमारी माकोले कोमूरोको सूर्यको जस्तो मुस्कानले आफूलाई लोभ्याएको जानकारी दिनुभएको थियो । माको भन्नुहुन्छ, ‘मलाई सानैदेखि थाहा थियो कि विवाहपछि मैले आफ्नो शाही दर्जा गुमाउने छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म शाही परिवारको सदस्य भएकाले हरेक शाही कामलाई सफल तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गरेँ । म आफ्नो जीवन पनि आफ्नै चाहना अनुरुप बिताइरहेकी थिएँ ।’
राजकुमारी माकोका २५ वर्षका प्रेमी कोमूरो एउटा पुरानो कानूनी फर्ममा काम गर्नुहुन्छ । एउटै विश्वविद्यालयमा अध्ययनको समयमा उहाँहरुको भेट भएको थियो । टेलिभिजनमा प्रसारित प्रेस कन्फ्रेन्समा कोमूरो बोल्दै गर्दा राजकुमारी उहाँलाई हेर्दै मुस्कुराउनुभएको थियो ।
२५ वर्षकी राजकुमारी माको राजकुमार फूमीहीतोकी सबै भन्दा ठूली छोरी हुनुहुन्छ । उहाँ विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ । राजकुमारी जुलाईमा नै आफ्नो विवाहको घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर जापानको पश्चििमी क्षेत्रमा ठूलो वर्षाले ल्याएको विपदले गर्दा पछि सरेको थियो ।
अघिल्लो - सलमानले फुटाईदिए फ्यानको आईफोन, यस्तो छ कारण
साम्राज्ञी बक्स अफिसकी ‘रानी’, ‘ए मेरो हजुर २’को आक्रामक कमाइ - पछिल्लो
मेक्सिकोमा अर्को शक्तिशाली भूकम्प, ४२ को मृत्यु
जापानी जहाजमा पनि चरा ठोकियो, आकस्मिक अवतरण
‘सैन्य उन्माद’ नगर्न पुटिनको चेतावनी